Jariidadaha - Page 2 - Geofumadas
Shirkadda Sirdoonka ee Shirka Brazil, ayaa la dalbadaa
Sanadkan 2013, Magacyadda Magazine iyo MundoGEO ayaa ku biiraya si kor loogu qaado Shirka Sirdoonka Goobta ee Brazil, kaas oo lagu qaban doono barbar socda MundoGEO # Isku xirka LatinAmerica ee Sao Paulo. Laga soo bilaabo sannado yar kahor Brazil oo ah jagada jilitaanka suuqa juqraafi ah; Arrin aad u muhiim ah oo loogu talagalay koonfureed koonfureed iyadoo tixgelineysa Magacyada Direegyada ...
Waa wakhti ay dib u eegaan joornaalada qaarkood kuwaas oo daabacaadihii dhowaan soo baxay; Halkan waxaan ka tagaa khibrado xiiso leh oo ka soo baxa daabacaadda ugu dambaysa ee majaladdan. 1 Geoinformatics. Khibradaha isticmaalaha ee isticmaalka Barnaamijka Furan ee GIS Software. Waxaa xiiso leh in la akhriyo maqaalkan, kaas oo ina tusaya waxa ...
Saameyntii 10 + xisaabiyeyaasha Twitter ee jawiga geospatial
Dhowr maalmood ka hor waxaan soo jeedinay soo jeedin xisaabeedyada 15 Twitter ah si ay u raacaan. Si aad u xirto sanadka 2012 waxaan dib u eegeynaa 11 ugu horeysay ee liiskaas, iyada oo tixgelineysa kuwa leh wax ka badan taageerayaasha 1,000; Xogta aan aaminsanahay inay faa'iido u leedahay kuwa jecel internetka oo ay wax ka bartaan ...
Mashruuca 2012 ee Mashruuca quarterly Lines (24, ma aha 4) ayaa laga heli karaa si bilaash ah bogga internetka ee Lincoln Institute. Qodobbada la soo xulay waxay baari doonaan arrimaha soo socda ee la xiriira isticmaalka dhulka iyo siyaasadda canshuurta: Kharashka hawlgabka iyo maaliyadda dawladda hoose Qoraal ahaan ...
MundoGEO, oo ah shirkada ugu badan ee wakiil ka ah xiriirka geospatial ee Latin America, ayaa bilaabay laba codsi si MundoGEO magazine laga arki karo qalab mobile, labadaba Apple Ios iyo Android. Sannadkan oo keliya, majaladdan ayaa isku darsaday waxyaabaha ku jira wargeysyada InfoGEO iyo InfoGNSS, waxaa sidoo kale lagu daray ...
Daabacaadii koowaad ee majaladda MundoGEO ayaa la bilaabay, taas oo aan ogaanay in ay noqon doonto isdhexgalka labada joornaal oo kor u qaaday boggan: InfoGEO / InfoGNSS. Nooca cusub ayaa noqon doona miisaan, kaas oo aan ugu yaraan heli doono nuqullada 6 sannadkii. Wixii faahfaahin ah ayaa la daabacay ...
Paper.li wuxuu abuuraa wargeyskaaga dijital ah
Waxa lagu soo bandhigay abaalmarinta Mashable ee qaybta warbaahinta bulshada mid ka mid ah adeegyadda shabakadaha bulshada oo leh koboc dhaqaale. Hawlgalku wuxuu u muuqdaa mid naga mid ah kuwa ugu fudud, ee asal ahaan ka jawaabaya su'aasha: Haddii aan heli karo wargeyska digitalka ah ee ugu muhiimsan ee aan raaco ... sababta aan ula wadaagno dadka kale? Laga soo bilaabo ...
Planet Open, pages 77 in aad bedesho maskaxdaada
Waxay ahayd sanad aad u firfircoon tartamada gvSIG, waxaan ku soo qaadannay Talyaaniga, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiis - oo ku dhex jira waddamada Faransiiska -, Uruguay, Argentina iyo Brazil - Latin America - iyo sida dhaqanka, Ballan furan oo la socda maalmo caalami ah oo gvSIG ah. Laakiin maaha ...
Habka cusub ee wargeysyada InfoGEO iyo InfoGNSS
Iyadoo farxad weyn ayaynu aragnaa in qaab cusub loo bilaabay wargeysyada InfoGEO iyo InfoGNSS, kuwaas oo si caadi ah loogu soo bandhigay qaabka pdf si loogu soo dejiyo. Nidaamka cusubi wuxuu hoos yimaada adeegga uu bixiyay CALAMEO si loogu soo bandhigo joornaalada internetka, oo aad u macquul ah hawlaha raadinta iyo nalalka. Tani waxaa laga helayaa ...
Ugu yaraan saddex wargeys ah bishan ayaa soo saara maqaallo xiiso leh jawiga juquraafi, iyo qaar ka mid ah muraayadaheenna, ka dibna waxaan u soo jeedinayaa sheekooyinka 10 wakhtiyada akhriska caafimaad qabta. Geoinformatics Waxaan jecelahay joornaalo badan, waxay la socdaan xiisaha mawduucyada soo socda: ISIP, Nidaamka ...
Dooxada Geo ee Brazil
dhacdooyinkii u danbeeyay beerta ku geospatial ayaa ah noo marti qaaday bulshada reer Brazil, sida haddii ay in mudo ah ka baxsan xarunta of Latin America. Waa layaabna ma leh, aragtiyaha sida ay u mashruuca Goldman Sachs Group sida mid ka mid ah afarta dal awood ku baxaya la Lagaga caalamiga ah ee sanad 2050 ah; oo ay la socdaan Russia, ...
Bentley Systems majallado
Just today ayaa soo gaaray PC Magazine, daabacaadda dijital ah ee Julio 2011. Waxaan fursad u helayaa inaan kor u qaado mawduucda ay halkan iigu soo dhaweeyeen horumarintaan aan dib u soo noqnoqonin ee ku soo laabanaysa wax kasta oo la shaqeeya ciddiyaha. Waxaan sidoo kale kor u qaadayaa dhamaadka talooyinka xiisaha leh ee laba joornaal oo dheeraad ah oo ku jira dhexdhexaadinta geospatial kaas oo ay jirto ...
Oo waxay soo gaadheen edition saddexaad ee joornaalka Geoinformatics ah, iyadoo qaar ka mid ah mawduucyada quruxsan xiiso leh. Eric Van Rees na la yaab in a talooyin tifaftirka gaaban, ka dib markii uu ku reebaya ee Globalgeo ee Barcelona, ​​halkaas oo dalalka lagu dhiiriyo inuu qoro maqaal ugu dhaqsaha badan, waana arki doonaa oo caymis gaar ah loo qabto in uu leeyahay software furan ...
Macmiilka PC, wuxuu iigu wareejinayaa qaabka dhijitaalka ah
Qaybta Ingiriisiga ah ee majaladdan waxay horay u samaysay hawlgabkeeda cimilada wanaagsan, inkastoo ay ku dhawaaqday version Spanish, dukaamada waawayn ayaa sii waday inay muujiyaan nuqullo. Ugu dambeyntii, ka dib dhowr bilood oo su'aalo ah ayaan u imid in aan aqbalo in Televisa ay ugu dambeyntii joojisay wax soosaarka qaab daabacadeed waxaanan dareemayaa in ...